Makambani anotendeukira kuInternational Social Networks | Martech Zone
Chitatu, June 18, 2008 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
Iko kune toni yeruzivo nezve ese maSocial Networks kunze kwewebhu, asi kufamba kwavepo kuti kuunze zvimwe zvakanaka zvemasocial network kuIntranet futi. Ndakaita tsvagiridzo pamusoro penyaya iyi kwehafu-yezuva yekudyidzana pasocial network yandakataura nayo ne IABC nezuro uye zvakawanikwa zvaive zvakakodzera kutarisisa zvakadzama. Ini ndaifanirwa kuchera zvakadzika kuti ndiwane info uye skrini, asi pane mashoma zviwanikwa kunze uko zvinotarisana neIntranet.
Iyo Intranet yakanyungudika uye ikafa kumakambani mazhinji pamberi pewebhu 2.0 matekinoroji. Zvinosuruvarisa, nekuti makambani mazhinji anobheja pane zano rekusazombodzoka kwariri kana ratadza. Iwo maIntranets ekutanga aisangova chinhu asi enhando enzvimbo dzekuvaka peji rewebhu iro dhipatimendi rega rega raifanira kushandisa kutumira nhau neruzivo, pasina zviwanikwa kana chero otomatiki. Microsoft yakaparura Sharepoint, asi kuedza kwaida kugadzirisa nekuchengetedza zvirimo kwaive kuchiri pamusoro pehunhu hwehunyanzvi hwemushandi wepakati.
Nekuuya kwe Google Apps, Social Networks, Wikis, Windows Sharepoint Services 3.0 nemamwe maturusi ekushandira pamwe nenetworking, inguva yekuti Intranet idzokere.
Bhizinesi Nyaya dzeMukati meSocial Networks
Wongorora uye Dhiraivha Masangano Ekubata - ita kuti vashandi, zvikwata uye mapurojekiti aenderane nemaonero emakambani.
Flatten Kambani Hierarchy - inopa nzira yakananga kubva kuna CEO kuenda kune wepasi mushandi uye zvinopesana. Izvi zvinotungamira mukuvandudzwa kwekutaurirana, kujekesa, kuvimba uye simba yevashandi.
Kurudzira Yemukati Networking - kupa vashandi nzira yekuwana vamwe vashandi vane zvido zvakafanana mukati nekunze kwekambani - zvemitambo, Machechi, mitambo yekuzvivaraidza, nezvimwewo. Kuva nevashandi vane hukama kwakasimba kunotungamira mukugutsikana kwevashandi nekuchengetwa.
Pfungwa - Idea Chizvarwa - maturusi ekugadzira mazano akajairika mune mashoma mashoma emakambani makuru. Digg-senge zvishandiso zvekusimudzira mazano emari chaiyo uye mimwe mibairo zvakajairika.
Nhau uye Ruzivo - share kambani uye mushandi nhau uye zvinoburitswa.
Resources - ipa raibhurari, tutorials, kushambadzira zvinhu, chigadzirwa zvinyorwa, rubatsiro, mazano, zvinangwa, bhajeti, nezvimwe
Ruzivo Kugovana uye Kubatana - ipa wikis uye zvakagovaniswa maapplication kuwedzera kukurumidza kwezvinodiwa zveprojekiti, zvinyorwa, nezvimwe.
Project-yakavakirwa Workforce - kupa nzira yevashandi kuronga kunze kwenzvimbo yepamoyo, hunyanzvi hunyanzvi, dhipatimendi, nezvimwe. Kukwanisa kutsvaga nekuwana vashandi vakakosha kubvisa cheni yekuraira kubva mukuita, zvichibvumira zvikwata chaizvo kuronga nekuita nekukurumidza.
Mukuongorora mambure, paive neakawanda 'mavhenekeri' ekuti makambani ari kutumira sei netiweki kuburikidza neiyo intranet - uye hunhu hwemakambani uye maturusi avo ari kutaurira. Ndokumbirawo mundiberekere pane zvandakawana pano - sezvo ini ndisina yakananga kuwana kuGoogle, Microsoft, Yahoo uye IBM, ndiri kushanda nezvinyorwa uye skrini dzinogona kunge dziine mavhiki… kana makore ekuberekwa!
Google's Moma haisi nyore injini yekutsvaga, Moma zvakare inobvumidza zviwanikwa zvevanhu kuti zviverengerwe uye zvionekwe pamwe chete nemidziyo yedigital. Kubva kune mamwe mawebhusaiti andakaverenga, Google ine yakafanana inoyevedza webhu yakavakirwa kodhi yekuongorora system, inonzi Mondrian.
Yahoo! Kuseri kwemba
Yahoo! Kumashure kunoratidzika kunge kunoratidzira mukurumbira chirevo chemamishini pamwe nekuronga zvinhu zvinotsigira chirevo icho kune vashandi vavo kuti vadzidze. Ndiri kushamisika nekutaridzika uku kutaridzika - uye, kutonga nematambudziko aYahoo mukuva nehurongwa, handina chokwadi chekuti nzira iyi iri kubhadhara zvakadii.
Mune sangano rakakura seBMM, ine mazana ezviuru zvevashandi, ingangodaro iri zano rakanaka kuisa saiti kumusoro uko vanhu vanogona kuwana mumwe nemumwe! Mukoko weinyuchi unoita kunge chinhu chakanakira vashandi kuti vaone uye vawane vamwe vashandi.
Saiti yeMicrosoft inoratidzika kunge inoisa pfungwa pazvinhu zvevashandi vayo pane zvigadzirwa nemasevhisi. Chazhinji munguva pfupi yapfuura, zvakadaro, Microsoft yatanga Townsquare - yekudyidzana kunyorera network uye kubatana.
Iwe haufanire kunge uri kambani hombe kuti ubatanidze maturusi ekushandira mumabasa ako ebasa. Pakambani yangu, takatamira zvachose ku Google Apps uye ndakatozvibatanidza ne Salesforce.
Hei Doug, posvo inobatsira - mukambani yangu takatamira kuGoogle Apps futi. Its super handy. Saka nekuda kwekukurukurirana kwemukati uye zvinhu zvakaita sekukosha kwazvo. Iyo calender uye maHTML zvakare akakura kune zvemukati zvinangwa. Ndakacherekedza ka glitch kadiki asi. Kuva midhiya kambani, isu tinoshanda pamapurojekiti mazhinji uye ini ndoona kuti ini handidi vamwe vevashandi vangu vanogamuchira ruzivo pane angu ese mapurojekiti. Takachinjira ku Deskaway uye ini ndinoona kuti panguva dzese ndinonzwa sekunge ndiri mukutonga kwakawanda. Uyezve pane zvivakwa zvekugovana mukati mechirongwa chimwe nechimwe kuti ndikwanise kugovera mablog uye mafaera nezvimwe - kuchengetedza zvinhu zvakapatsanurwa mukati memapurojekiti - uye analytics ibhonasi yakawedzerwa. chinhu chinoshayikwa muapp chiri chat asi zvino Google Apps zvinopfuura zvinoumba izvo. DA haisiriyo yega chishandiso - theres Zoho uye Wrike neBasecamp nezvimwe - asi ini ndinoona kuti Deskaway yaive nemusoro - $ 10 - $ 25 - zvinoenderana nezvinodiwa neuiri uye zvakare ine SUPER interface - wakamboedza chero maturusi akadaro?
Ida icho CHOKWADI CHAMAKASANGANISIRA VHIDZO MAVHIDZO 🙂
Ndatenda Aditya, ndiri shasha yekuSeesmic!
Sep 5, 2008 na12: 32 PM
chinyorwa chakanaka. Iwe wakarasikirwa imwe yakasimwa muhupenyu, yakavakwa nevashandi vaviri vachishandisa yakavhurika sosi mapuratifomu uye kusimudzira (drupal) uye muenzaniso wakanaka weanopokana-pamusoro-pasi nzira. Blueshirtnation.com, Best Buy yemukati social network. Gary Koelling naSteve Bendt ndivo vakasika. Zvimwe zvinongedzo….
Ivo vanotaurwa zvakare mubhuku raCharlene Li, "Groundswell".
Ndatenda! Zvinonakidza kwazvo apo vashandi chaivo vanozvitorera ivo kutanga network yemagariro. Ndiri kuenda kunozviongorora.